महासागरिया (जकार्ता), सागर विश्व जकार्ता - जावा
ठेगाना: जया अनको जकार्ता यूटा डीकेआई जकार्ता 14430, इंडोनेशिया
फोन : +62 21 6452976
खुल्ला समय: 9: 00-18: 00
दक्षिणपूर्व एशियामा सबैभन्दा ठूलो एक्वैरियम स्थापना भएको थियो जकार्ताको मेयर , 19ओयूओओमोमोर्मिनोटोमा। संस्था4वर्ष पछि पूरा गर्न थाल्यो। आज एक्वैरियमले बच्चा र वयस्कहरूलाई धेरै दिनको लागि डिजाइन गरिएका धेरै शैक्षिक र मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। परिसरको मुख्य एक्वैरियमले5लाख भन्दा बढी लीटर पानी समावेश गर्दछ र6मिटरको गहिराइमा पुग्छ। सम्पूर्ण एक्वैरियममा समुद्री र नदीका4सय भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्, जसमा 350 विभिन्न प्रजातिहरू छन्।
समुद्री विश्व एक्वैरियम को मुख्य एक्वैरियम
जकार्ता मा महासागरिया विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ जुन वयस्कों र बच्चाहरुका लागि रोचक छ। आत्म-चालित पथको साथ 80-मीटर-उच्च एक्क्रेलिक सुरंग सबैभन्दा रोमाञ्चक कुरा हो। यो 24x38 मीटर को आकार मा एक मछलीघर को माध्यम ले गुजरता छ। टाउको देखि सीधी एक ठूलो समुद्री निवासियों मा विचार गर्न सक्छन् जस्तै:
यदि तपाइँ खाना खानको बेला एक्वैरियममा आउनुभयो भने, तपाईं एक शानदार दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै स्कूबा विविधताले आफ्नो हातबाट सीधा खाना खाए। साथै, तपाईं माथिबाट एक्वैरियमको जीवन हेर्नको लागि अवलोकन डेक चढ्न सक्नुहुन्छ।
एक्वैरियममा बच्चाहरूको लागि मनोरञ्जन
बच्चाहरु लाई विशेष रूप देखि इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स जस्तै बच्चाहरु, जहां उनि सीधे पानी को पानी को निवासी संग संपर्क गर्न सक्छन्। विशेष एक्वैरीजमा, उनीहरूलाई शार्क र गोठालो खाना खाने मौका दिइनेछ, स्टिंगर र शार्क बच्चाहरूलाई छुनुहोस्। तपाईं सिनेमामा जान सक्नुहुन्छ, जसमा सागरको जीवनबारे फिल्महरू छन्। अंग्रेजीमा छापहरू छन्।
अनुसूची अनुसार, तपाईं विभिन्न शोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी प्रशिक्षकहरूले भयानक मगरमण्डल वा पिराहाहासासँग सामना गर्छन्। कार्यक्रमहरू दैनिक 13:00 बजे आयोजित हुन्छन् जुन तपाईं मगरमञ्चको एक शोबाट पर्खिरहेका छन्, र 9:30, 12:00 र 16:00 मा पियानाहाहरूसँग देखाइन्छ।
वृद्ध छोराछोरी oceanarium मा स्थित समुद्री समुद्री संग्रहालय भ्रमण गर्न रुचि हुनेछ। यहाँ तपाईं माछा र समुद्री जनावरहरूको सबै जीवित र पहिलेदेखि विलुप्त प्रजातिसँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ।
जकार्तामा एक्वैरियम भ्रमण गर्ने विशेषताहरू
एक्वैरियमको सञ्चालन समय हरेक दिन900 देखि 18:00 सम्म हुन्छ, तर यो हप्तामा आउन उत्तम छ, किनकि सप्ताहांतमा धेरै दर्शकहरू छन्। यो न केवल पर्यटकहरूका लागि, तर बच्चाहरूसँग स्थानीय परिवारहरूको लागि मन पर्ने मनपर्ने ठाउँहरू मध्ये एक हो। एक्वैरियममा नेभिगेसन धेरै सरल छ, तर पर्यटकहरूको लागि यो पनि नेभिगेट गर्न सजिलो थियो, गलियर्सहरूले माछा र जनावरहरूको सुन्दर मोडेलहरू राखेका थिए जुन अर्को हलमा तपाईं पर्खिरहेका छन्।
महासागरियाम जकार्ताको मनोरञ्जन पार्क अन्र्क ड्रीमल्याण्डको क्षेत्रमा स्थित छ, र यसको साथमा तपाईं पानी पार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र,4डी मा चलचित्रहरू देखाउन सिनेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि सुसज्जित समुद्र तटहरू, एक पूर्ण गोल्फ कोर्स, ब्यान्डिङ, क्याफेहरू र रेस्टुरेन्टहरू छन्।
साप्ताहिकमा समुद्रतारामा टिकटको मूल्य $6हो, र सप्ताहांत र छुट्टि $ 6.75 मा। पार्कको प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै प्रवेश टिकट छ।
जकार्तामा सागरनाथम कसरी प्राप्त गर्ने?
सागर संसार शहर को उत्तरी भाग मा जकार्ता खाडी को किनारा मा स्थित छ, केन्द्र देखि 10 किमी। पार्कमा प्राप्त गर्दै ट्याक्सीले सबैभन्दा सजिलो छ, यसले आधे घण्टा भन्दा बढी लिने छैन।
जकार्ता को पार्क देखि पार्क सम्म र oceanarium मा बसें 2,2ए,2बी,7ए,7बी हो। यो यात्रा एक घण्टा भन्दा कम कम हुन्छ। टिकट मूल्य $ 0.3 हो।
स्की रिजर्व एभोरियाज
यॉर्कशायर टेरियर - पिल्ला को हेरविचार
माउन्ट टमको वनस्पतिक गार्डन
जापानी प्रविधिमा अनुहार विस्तार
कोलोस्ट्रम - प्रिस्क्रिप्शन
पार्कमा के गर्ने?
जेनिफर एनिस्टनको जीवनी
विवाह गर्नुअघि अन्न पार्टीको दृश्य
नमकीन आटाबाट साईन
भान्साको तालिकामा पानी-उत्कृष्ट उत्कृष्ट टेबलकोट
Mastodinone संग हस्तमैथुन
डेमी मूरले फिल्मको प्रीमियरको प्रजनन दृश्यको साथ सबैलाई प्रभावित गरे "द ब्लाइन्ड"
हाइपरटेन्सी संकट - उपचार
वजन खोने तरिका
San Remo - आकर्षण
हतियारको बारेमा के कुरा गर्छ?
शरीरको तापमान कसरी वृद्धि गर्ने?
कुन हप्तामा जन्म दिनुहुन्छ?
कफी शरीर स्क्रिब
शरद ऋतुमा पोलो कार्बोनेट हरा हरियोहाउसको प्रसोधन